विषैविषले घेरेको किसान- विविधा - कान्तिपुर समाचार
अहिले किसानहरू ३ पटक विष सेवन गर्न बाध्य भइरहेछन् । पहिलो, खेतीपातीमा उत्पादन बढाउन राखिएको विष । दोस्रो, भण्डारण गर्दा राखिने विष । तेस्रो, खेतीपाती बिग्रेर या ऋण तिर्न नसकेर बाध्यतावश खाने विष ।
श्रावण ४, २०७५ डा कृष्णप्रसाद पौडेल
काठमाडौँ — रसायन र विषादीमा आधारित खेतीपाती मानव स्वास्थ्यभन्दा खाद्यवस्तुमा व्यापार गर्ने र नाफा कमाउनेतर्फ उन्मुख छ । यस्तो दृष्टिले आधुनिक मानव जीवनको मुख्य आधार कृषिक्षेत्र संकटग्रस्त बन्दैछ । यस्तो व्यापारले हामीलाई कस्तो अवस्थामा पुर्‍याउँछ ? यसको सटिक उत्तर एक दक्षिण अमेरिकी आदिबासीले दिएका छन्, ‘जुन दिन यस धर्तीको अन्तिम माछो मारिनेछ, अन्तिम रुख काटिनेछ र अन्तिम नदी प्रदूषित हुनेछ, त्यो दिनमात्र मानिसलाई थाहा हुनेछ कि पैसा खाएर बाँच्न सकिँदैन ।’
नेपालको खाद्य प्रणाली हरित क्रान्ति कृषि प्रणालीमा आधारित छ । यो वैदेशिक सहायता आउन थालेसँगै बढी उत्पादनका लागि उत्पादन क्षेत्र विस्तार, धेरै फल्ने बिउको प्रयोग, रासायनिक मल, सिंचाइ र दुई वा दुईभन्दा बढी बाली लगाउने अभियानबाट सुरु भएको थियो । तर अहिले यो जसरी हुन्छ, नाफामात्र कमाउने ध्याउन्नसँगै रसायन, विषादी, हर्मोन र नगल्ने प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगबाट ग्रसित छ । यिनको प्रयोगले कृषि उत्पादन र माटोको उत्पादकत्वमा कमी आइरहेको छ । जैविक विविधतामा ह्रास आउनुका साथै जोखिम सहने क्षमतामा कमी आएको छ । यसबाट आउने खानेकुरामा मन्दविष छ । यसले चिनीरोग, रक्तचाप, मुटुरोग, क्यान्सर र मिर्गौलाले काम नगर्ने खालका स्वास्थ्य समस्या दिनदिनै बढाइरहेको छ ।
आजभन्दा ८० वर्ष पहिले अल्बर्ट हवार्डले कृत्रिम मल (रसायन) बारे आफ्नो पुस्तक एन एग्रिकल्चर टेस्टामेन्ट (कृषिको बाइबल) मा लेखेका थिए : कृत्रिम मल (रसायन) को प्रयोगले स्वत: कृत्रिम पोषण, कृत्रिम खाना, कृत्रिम वस्तुभाउ र अन्तत: कृत्रिम मानव (महिला र पुरुष) बन्ने प्रक्रिया भइरहेको छ ।’ यो कुराको मर्म अहिले उजागार भइरहेको छ । यस्तो कृत्रिम प्रक्रिया कसरी खानेकुरासँग जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा अहिले निरन्तर बढिरहेको नसर्ने दीर्घरोगहरूले पुष्टि गर्दैछ ।
२० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा २ लाख ५० हजारभन्दा बढी किसानले आत्महत्या गरेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कमा नपरेका किसानका यस्ता आत्महत्याका घटना अझ बढी हुन सक्छन् । यसको मूलदोष हरित क्रान्ति कृषिलाई दिने गरिएको छ । किसानहरूले उत्पादन बढाउन बिउ, रसायन र विषादीका लागि खर्चिनुपर्ने रकमको अभावमा ठूलो परिणाममा ऋण लिन बाध्य हुन्छन् । यस्ता आत्महत्या खेतीपातीबाट आम्दानी नहुँदा ऋण तिर्न नसकेर, घर व्यवहार चलाउन नसकेर र विषादीको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण मानसिक विचलन भएर हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
यो रोग कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा नेपालमा पनि विस्तारै भित्रिरहेको छ । पहुँच नभएका साना किसानले ठूलो ऋण नपाउने भएर आत्महत्या गरिहाल्ने तहमा नपुगेको भए पनि घर व्यवहार चलाउन नसकेर अत्यधिक विषादीले विक्षिप्त भएका उदाहरण बाहिर आएका छन् । अहिले किसानहरू ३ पटक विष सेवन गर्न बाध्य भइरहेछन् । पहिलो, खेतीपातीमा उत्पादन बढाउन राखिएको विष । दोस्रो, भण्डारण गर्दा राखिने विष । तेस्रो, खेतीपाती बिग्रेर या ऋण तिर्न नसकेर बाध्यतावश खाने विष ।
खेतीपातीका यी नकारात्मक प्रभावबाट बचाउन रसायन र विषादीरहित, कम लगानीको पर्यावरणीय कृषि अपनाउनुको विकल्प छैन । हामीलाई यसतर्फ बढ्ने अहिले ठूलो मौका छ । यस्तो कृषि प्रणाली स्वस्थ खानाको स्रोत हो । यो स्थानीय स्रोतको दिगो परिचालनमा आधारित भएकोले उत्पादन, रोजगारी र किसानको आम्दानी बढाउन सक्षम छ । अति शुद्धताको कुरा नगर्ने हो भने नेपालको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र आफैंमा जैविक छ, जसको प्रबद्र्धन गर्न धेरै कठिनाइ छैन । जैविक उत्पादनको माग देशभित्र र बाहिर बढ्दैछ ।
तर हाम्रा कृषिका नीति, संरचना र खेतीपातीका अभ्यास खाद्यका लागिभन्दा आम्दानीका लागिमात्र अभिमुख छन् । हामी कृषि उपजको व्यापारबाट यति धेरै प्रभावित छौं कि बेच्ने सम्भावना नदेखेपछि न एक बोट लगाउन मन गर्छौं, न एक बोट स्याउ नै उमार्न । यति धेरै खाद्यान्न आयात गरिरहेको अवस्थामा कृषिलाई खाद्यमुखी बनाउने नीतिगत पहल कृषि सपार्ने ठूलो मौका हो ।
यी मौकामात्र होइन, नेपालको कृषिको मोडलाई फेर्नैपर्ने बाध्यता छ । स्वच्छ खानेकुरा र अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि र कृषिको आधार पर्यावरण तथा माटो सुधार्नुको विकल्प छैन । हाम्रो जस्तो पहाडी कृषिले सम्म मैदानी कृषिसँग आम उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सक्दैन । तुलनात्मक लाभको कृषिको दृष्टिकोण अपनाउनु एकमात्र विकल्प हो ।
रसायन र विषादीका जोखिम अनगिन्ती छन् । एक त रसायनले माटोभित्र बिरुवालाई चाहिने पोषण तत्त्व बनाउने प्रक्रियालाई तहसनहस पार्छ । यिनको प्रयोगले माटोको प्राकृतिक गुणमा फेरबदल हुनेहुँदा माटोमा रहेका सूक्ष्म जीवाणुहरू नष्ट हुन्छन् । यसले माटोमा खनिज चक्रसमेत कमजोर बन्छ । रसायनसँगै पोटास, फस्फोरस र अन्य खनिज पदार्थ पनि बाहिरबाट दिने गरिन्छ । यसरी माटोमा पोषण चक्र अवरुद्ध हुँदा बोटबिरुवा पोषण तत्त्वका लागि बाह्य स्रोतमा भर पर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
अत्यधिक रसायनको प्रयोगले माटो र बिरुवा दुबैको आफै खाना बनाउने स्वावलम्बी तथा रोग निरोधक क्षमता कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । कालान्तरमा बोटबिरुवाको वृद्धि र उत्पादन दुबै घट्छ भने रोग तथा किराको महामारी फैलिँदै जान्छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण रसायन र विषादीको प्रयोग हो । जब हामी रसायन र विषादी हाल्छौं, यसले प्रकृतिमा रहेका मित्रजीव (जसले बोटबिरुवा नष्ट गर्ने शत्रुकिरा खान्छ) समेत मार्छ भने शत्रुकिराको विष सहने क्षमता बढ्छ । यसको समाधान भन्दै थप रसायन, हार्मोन, भिटामिन थप्ने गरिन्छ । यसको कुनै सीमा छैन । यही कुरा पशुवस्तु र मानिसलाई दिने रसायन, हार्मोन र भिटामिनको हकमा लागू हुन्छ । परनिर्भरताको यो चक्रले जीव तथा वनस्पतिको खाद्य प्रणालीको समग्र प्रक्रियालाई ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ ।
बाहिरबाट दिइने खनिजको प्रभाव अझै भयावह छ । पोटास र फस्फोरस जस्ता जीवन्त प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण खनिज कृत्रिम तरिकाबाट बनाउन सकिन्न । यिनको अर्को विकल्प छैन । यिनका खानी लगातार दोहन गर्ने काम भइरहेको छ । यी विस्तारै सकिँदै जानेछन् । जविन प्रक्रियाका यी खनिजको प्राकृतिक पुनर्उत्पादनको प्रक्रिया बिगार्नु भनेको आफ्नै अस्तित्वको अन्त्य गर्ने आत्मघाती बाटो हो । बाहिरबाट दिइने पोटास र फस्फोरस जस्ता खनिजको अर्को ठूलो अर्थ राजनीति पनि छ । यी खनिजमध्ये पोटासको ७० प्रतिशत भण्डार पूर्व सोभियत राज्यहरू र क्यानाडामा छ भने र ८५ प्रतिशत गुणस्तरीय फस्फोरसको भण्डार मोरक्कोमा छ । अहिलेकै जस्तो बाह्य स्रोतमा आधारित खेती प्रणाली रहिरहे यसको नियन्त्रणले खनिज तेलले निम्त्याएको भन्दा चर्को विश्वव्यापी तनाव र झगडा हुनेछ ।
हरित क्रान्ति कृषिको यस्तो खतरनाक नकारात्मक प्रभावबाट नेपाली माटो र आम नागरिकको स्वास्थ्य बचाउनु सरकारको दायित्व हो । तर घरि–घरि लाग्छ, सत्ताको उन्मादले मानिसको मति बिगार्छ र सत्ताधारीहरू यो दायित्व भुल्ने गर्छन् । हैन भने नसर्ने दीर्घरोगको अहिलेकै विकराल रूप देखेका नीति निर्माताहरू आफै र भविष्यका सन्ततिहरू यस्ता रोगबाट पीडित हुन नपरोस् भनी स्वस्थ खानेकुराको स्रोत पर्यावरणीय अर्थात जैविक कृषि अपनाउन उचित कदम किन चाल्दैनन् ? उल्टै रोग उपचारका नाममा आफै र आसेपासेलाई राज्यकोष बाँडेर बदनामी खेपिरहेका छन् । पैसाले तत्कालका लागि एकाध चम्त्कार ल्याए होला, तर पैसाले मात्र सबैको काल टर्दैन । यो दीर्घकालीन समाधान हैन ।
जैविक खेतीको सपना देख्ने ऊर्जाशील समूहसँगको सहकार्यबाट मात्र भावी सन्ततिको स्वास्थ्य संरक्षण गर्न सकिनेछ । आशा गरौं, सरकार यो कुरा आत्मसात गरी बढ्नेछ ।
प्रकाशित : श्रावण ४, २०७५ ०७:४३